समता माइक्रो फाइनान्सको आइपीओ खुला, कहाँ-कहाँबाट दिने आवेदन ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
बुधबार, बैशाख १२, २०७५ | Wednesday 25th April 2018
समता माइक्रो फाइनान्सको आइपीओ खुला, कहाँ-कहाँबाट दिने आवेदन ?
समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आइपीओ बिक्री खुला भएको छ । एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ९४ हजार आठ सय कित्ता आईपीओको बिक्री खुला भएको हो ।
यसमा न्यूनतम ५० कित्ता र अधिकतम पाँच सय कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । एक हजार आठ सय ९६ कित्ता सेयर कर्मचारीलाई र चार हजार सात सय ४० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोष कम्पनीहरुलाई छुट्याइएको छ ।
आईपीओका लागि एनआइबीएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड, लाजिम्पाट काठमाडौंमा आवेदन दिन सकिनेछ । साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको उपत्यका र बाहिरका सबै शाखा कार्यलयबाट आवेदन फारम बुझाउन सकिने छ ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंङकको ठमेल, पुतलीसडक, लाजिम्पाट, कालीमाटी, बौद्ध, बत्तीसपुतली, पुल्चोक, लगनखेल, सिपाडोल शाखामा आवेदन दिन पाइने बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्सले जनाएको छ ।
माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यलयहरू, सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेड डिल्लीबजार काठमाडौं, भिबोर क्यापिटल लिमिटेड, कृष्णगल्ली, ललितपुर, गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, डिल्लीबजार तथा शाखा कार्यालय, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकका शाखा कार्यालयमा आवेदन दिन सकिनेछ ।
त्यसैगरि, आइसीएफसी फाइनान्सका शाखा कार्यालय, हाम्रो बिकास बैंक बिदुर बट्टार, सिनर्जी फाइनान्सको शाखा कार्यालय, साझा विकास बैंकका शाखा कार्यलयहरूबाट सेयर भर्न सकिने छ । आइपीओ बिक्री बन्द छिटोमा पुस २२ गते हुनेछ । माइक्रोफाइनान्सको बिक्री प्रबन्धकको एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स रहेको छ ।
स्याङ्योङको नयाँ वर्ष अफर, ४ लाखसम्म नगद
सुनको भाउ बढ्यो, कति पुग्यो मूल्य ?
सरकारले ल्यायो नया नियम; विदेशबाट ल्याएको पैसा पुँजीबजारमा लगानी गर्न नपाइने !
अर्थमंत्रीले संसदमा दिए यस्तो “निराशाजनक” भाषण, के देशको अवस्था ओरालो लागेकै हो त ?
विश्वस्तरीय प्रविधी VRM जडान गरी जगदम्बा सिमेन्टद्धारा उत्पादन सुरु
रिलिज नहुँदै ५० मिलियन डलर कमाउने फिल्म
गगन थापालाई यस्तो सुझाव दिदै रामहरी खतिवडा सभापति देउवाको बचाउमा !
रक्षामन्त्री पोखरेलले बराबरीकाे अडानमा एकता हुँदै हुँदैन भनेपछि प्रचण्ड तनावमा !
गृहमन्त्री थापाको आखा अगाडी बाट डिएसपी फरार, ३३ किलो सुन प्रकरणमा नयाँ रहस्य बाहिरियो !
यति नमज्जाले डुब्यो फिल्मको आधा अर्ब लगानी, निर्माता तथा नायक भन्छन मलाई डुबाइयो !